Ukuphila ividiyo incoko - IVIDIYO INCOKO-Uthando-intanethi!
Dating site kwi-Us-Eontario kunye free abantu Dating
Loyalty ubizwa ngokuba obaluleke kakhulu kwi-Lionheart
Ndicinga ukuba zingaba ngokugqibeleleyo ezilungiselelwe kwaye lowo unako, nangona kuphumla zibe enqwenelekayo, akunyanzelekanga ukuba baqonde ke elubalaKwi-Eontario umntu. Le yi free ubhaliso bonke abantu ke lendawo ngezixhobo ezibonakalayo yabucala. Bhalisa kwi-Eontario nezinye iindawo apho abantu bahlala khona. Ukuba ufuna ukufumana acquainted, yenza i-ufakelo, yenza entsha acquaintances, ukwenza abahlobo kwaye kamva, bonwabele zethu Dating site.
I-generators kwaye oscilloscope kuziphatha kanye kanye njenge zabo real-ubomi counterparts, ngaphandle kokuba kuba indlela yi-ALT kwaye CHOP ye-oscilloscope, apho ukusebenza apha ngendlela efanayo, xa enyanisweni, isiphumo kuba igophe ngu ezahluka-hlukileyoNangona kunjalo, kwanele khumbula ukuba nokuba indawo umkhethi isiqhagamshelanisi (ALT okanye CHOP), isiphumo kukufumana ekhusini i-amagophe ezimbini voltages (hayi kuba ubhideke kunye UKONGEZA, oko akunjalo khangela enye amagophe, ukongeza ezimbini lanes). Xa i-oscilloscope ivuliwe, sebenzisa amaqhosha ubunzulu kwaye ugqaliso ukufumana umahluko kukukhanya kodwa kulungile, kwaye kwangoko zeros, ekubeni kuthathelwe care ukuba kufuneka ibekwe i-iiswitshi ye-osc ukuba GND. Tshintsha imimiselo generators, kwaye ke abo i-oscilloscope (ukujikeleza ye-pathways kwaye ixesha umlinganiselo) ukuze kakuhle bonakalisa voltages ekhutshwe lisebe generators. KUBALULEKILE KUBA u-indawo: Sebenzisa ULINGANISO knob ye-GBF ukuze angenise a ngxwabacomment ezikhoyo kwi-izixhobo zokupeyinta umqondiso, kwaye kwangoko ukuqwalasela umahluko phakathi kweendlela AC kwaye NGXWABACOMMENT ye-oscilloscope.
Molo kwaye ndiyabulela kuba 'simulator'
Njengoko enyanisweni, ukusetyenziswa ladders unsuitable kuba ukwenzeka rhoqo kwaye okanye voltages ye-generators kunokubangela imizobo, incomprehensible, okanye nkqu akukho imizobo kwaphela (ngokulinganayo! ngaphandle-screen). A ngokukhawuleza Oopopayi. Okulandelayo kuya kwi-adobe kwisiza (ikhonkco ezantsi kwiphepha). Elincinane-bmp nangona kunjalo, ngenxa yokuba ikhasi ufakelo: yintoni umahluko phakathi ngxwabacomment voltage ngokubanzi zidityanisiwe isiqhagamshelanisi ababini, kwaye voltage ulinganiso apho uxoxwa kwi-uphaw u (ngaphandle ukusuka neeyantlukwano zabo voltage, uqukuqelo.). I-voltage ulinganiso yenziwe yi i-GBF ingaba ngenene nto engelilo a ngxwabacomment voltage. Ngoko ke, akukho umahluko phakathi voltage ulinganiso yenziwe yi-GBF kwaye voltage enikezwa nge ngokubanzi okokoko. Eneneni, amplitude modulation nge ngokubanzi ukuba akanalo i-linganisa umsebenzi, sidibanisa a ngokubanzi okokoko ezifana ukuba omnye ifakiwe kwi-ingoma ezimbini ukwenza ulinganiso voltage udityanisiwe kwi-uphawu kunye ngokubanzi ukuba udala uphawu ukuba kusasazwa.
elungele iintlanganiso abafazi ividiyo ividiyo incoko Dating ngaphandle ubhaliso omdala Dating zephondo umfanekiso Dating ubhaliso kuba free web incoko roulette i-intanethi Dating ngaphandle ividiyo free ividiyo incoko amagumbi ngaphandle ubhaliso uyakwazi kuhlangana Dating ngaphandle ubhaliso kuba free